IBlack Mirror Isizini 5 Ibuyela Kwezisekelo Zesizini Yayo Engcono Kakhulu yeNetflix - Isiko Lopop
IBlack Mirror Isizini 5 Ibuyela Kwezisekelo Zesizini Yayo Engcono Kakhulu yeNetflix
Ukunikezwa okuhle kakhulu kuCharlie Brookers okusha okulindelwe okusha Isibuko Esimnyama isipikha esikhulu, esigcine sehlile namhlanje ekuseni ngo-3AM EST, siwumbukiso omncane. Ngesizini yesi-5, uchungechunge lubuyele ebufushane obuthandwa yi-BBC eyaqala ukubonakala nalo — iziqephu ezintathu kuphela kusethi. Ama-oda amafushane kungenzeka ukuthi angene ku- Isibuko Esimnyama umusa; Izizini 1 no-2 zihlala zinamandla kunawo wonke lo mbukiso obekhona kuze kube manje, ngenkathi iphinda kabili i-oda leNetflix eshiye amaSeasons 3 no-4 ngeziqephu ezintsha zakudala kanye nama-dud angakhohlakali ngokufanayo. Le sizini entsha ingahle ingazigabisi nge-timer yokuqala njengaseSan Junipero noma i-USS Callister, kepha ngekhwalithi yobungako bayo yodwa, lena yisizini enhle kakhulu yama-dystopian selokhu yahambisana neNetflix Originals.
Lowo ngumphumela ongcono kakhulu kunalokho okuphakanyiswe ekuqaleni yi-trailer yeSizini 5. Isiqephu ngasinye se- Isibuko Esimnyama ubanda kakhulu — angivamile ngisho nokufunda ama-logline noma izifinyezo. Njengalokhu, umdali / umbhali uCharlie Brooker ungomunye walaba bafundi abazaziyo ongabethemba ukuthi bazoletha inqola ehlelwe ngobuhlakani ezoqeda ukoma kweziqephu ezintsha ngaphandle kokunikeza umdlalo ukulandisa ngakunye. Ngayinye yalezi zitolimende ezintathu ifaka ukujika okuhle kwesokunxele, kepha isimanga esimnandi kakhulu kuseSmithereens, ngoba ukukhuluma iqiniso, kuleyo trailer eshiwo ngenhla kubukeka sengathi kungaba yinto entsha embi kunazo zonke.
yini i-nf emele i-rapper
Iqiniso elijabulisayo ngochungechunge lwe-anthology oluvame ukwabiwa phakathi kwababukeli yincazelo yesihloko sayo, uBrooker akuqinisekisile i-2011 op-ed ye Unogada : Uma ubuchwepheshe buyisidakamizwa, yini-ke, imiphumela engemihle? 'Isibuko esimnyama' sesihloko yiso ozosithola odongeni ngalunye, kuwo wonke amatafula, entendeni yesandla ngasinye: isikrini esibandayo, esicwebezelayo se-TV, i-monitor, i-smartphone. Njengoba isitatimende semishini yochungechunge besiphambili futhi siphakathi nendawo ngaleso sikhathi, umuntu angasho ukuthi isiqephu esigxile emsakazweni oqhutshwa ukuhlanya okusondelana nokusondelana nokulutha kwesikrini kungenzeka kube semakhaleni ngokungadingekile, ngokukhululekile, noma kudoti. ku-E, ngokweqile.
indlela engcono yokugcina amajikijolo amasha
Isandwe phakathi kweStriking Vipers, esiziqhenya ngochungechunge lokuqala lwabamnyama abahola phambili noRachel, uJack no-Ashley Too, isiqephu seMiley Cyrus esinezihloko eziningi, iSmithereens, ngokungangabazeki, iyona ehamba phambili kulaba abathathu. I-protagonist yochungechunge, edlalwa nge-livewire aplomb ebunjiwe ngu-Andrew Scott, impela ... ikhathazekile ... ngemiphakathi yesikrini jones kanye nabaphathi beSilicon Valley abagcina isilinganiso sethu. Futhi unenhloso ethile ukuqondisa ukufutheka kwakhe. Ngiya kweminye imininingwane; Ngisho ukuthi ubani odlala i-jack-esque tech bro ufuna izethameli naye.
Akunjalo nokuthi umthombo wolaka lohlelo lokusebenza lweScotts konke lokho akulindelekile. Okubalulekile ukuthi kwenzeka kanjani — ngokuqinile, kuhamba kahle, futhi mhlawumbe okubaluleke kakhulu, okuhlekisayo ngokungahambisani nakho konke lokho. Isiqephu ebesibonakala singathi shu ekuboneni kokuqala esikhundleni salokho sikwazile ukweqa unqenqema lokuzifanisa, esikhundleni salokho sifike njengekhefu lodonga lwesine. Ukube bekungenanjabulo, lokho bekungeke kube njalo. Ubudlova nokungathokozi ekusebenzeni kwamaScotts kumane nje kwahlekisa ngendlela ehlekisayo njengoba kungathuki; I-rant aqhubeka mayelana nabaqeqeshwa ngesikhathi esibi kakhulu akunakwenzeka ukuthi angahleki, njengesithombe sefoni esibalulekile asabelana ngaso kungekudala.
ama-transformers: ukuziphindiselela kwesikhumba esiwile kanye nodaka
Leyo njabulo engalindelekile ikhahlela cishe maphakathi neMileys ep, uRachel, uJack no-Ashley Too. Noma ngubani onovalo lokuthi ukubukeka kwakhe bekungeke kube ngaphezu kokuphonswa kukasaziwayo iningi lethu selikhathele ukuvele sikhathazeke ngokungenasidingo. Ngibuze futhi ngesonto elizayo, futhi ngingahle ngithole le kuneSmithereens, ngokuthembeka.
Kuthathwe ndawonye, ​​noma ngabe isinqumo sokukala ukuhleleka kwesiqephu sibuyele ezinsukwini zangaphambi komkhuba sonyaka bekungamabomu noma kulungile, njengoba uBrooker esho, umphumela amahora endoda faka ku-interactive loosie Bandersnatch, iSizini 5 izwakala impela njenge- Isibuko Esimnyama lokho kubuyela ezisekelweni zayo. Ngenkathi ezinye iziqephu zezinkathi zeNetflix zihlose ukuvelela nokukala noma ukushiya ngobuhle, okubaluleke kakhulu enseleleni kwalimaza ikhwalithi.
Ama-Vipers amangazayo, uRachel, ikakhulukazi amaSmithereens ahlelekile uma kuqhathaniswa nalokho uBrooker akulethele kwi-dime yeNetflix kuze kube manje; impumelelo yesikhathi esizayo ikhombisa impumelelo yesizini iyonke. Akekho ama-blockbusters, kepha ekugcineni bazizwa becebile kunenqwaba yemali yokugibela engakhunjulwa ezungezwe bathi, i-USS Callister, enobuhlakani endabeni uma kungenjalo. Ngonyaka lapho ayengasibekelwa khona ukubuya kokhokho bakhe abangokomoya, uBrooker wavuka inselelo ngokuhamba kancane, waphinde wathola isihloko njengoRod Serlings owalandela esikhundleni sakhe.
ungayenza kanjani iresiphi yesibuko se-glaze
ungenza kanjani ama-pancake ngesiqalo somuncu
ikhekhe lebhokisi lekhekhe elibomvu elihle kakhulu elibomvu
calvin klein ukubuyekeza okuncane kakhulu kwesudi efanelekile